Bathukuthele bayaveva kunekwa eyabafeyilile eFundokuhle | News24
Bathukuthele bayaveva kunekwa eyabafeyilile eFundokuhle
ISITHOMBE:SITHUNYELWE Udonga lwaseFundokuhle Secondary School obekunekwe kulona amagama abafundi bakamatikuletsheni abangaphumelelanga.
BATHUKUTHELE bayaveva abazali babafundi bakamatikuletsheni abangaphumelelanga base–Fundokuhle Secondary School emva kokuba kunekwe imiphumela yalabo abangaphumelelanga odongweni lwesikole.
Laba bazali abebewotha ubomvu basola uthishanhloko uMnu Mlungisi Maphumulo ngokwehlisa isithunzi salabafundi njengoba amagama anekelwe inoma ubani ofika kulesi sikole, phezu kwalokho kwabhalwa nezifundo abangaziphumelelanga.
Bathi bathuke kwaphela nasozwaneni uma bephelezela abantwana babo ngoLwesithathu olwedlule, bethola leli phepha ebelinanyathiselwe odongweni. Omunye wabazali okhulumen ne-Echo the yize bekhalazile ngalesi senzo kuze kwashaya uMsombuluko lamagama engakhishiwe.
Uthe: “Kungenzeka ukuthi yena wenze le senzo ngoba efuna ukugqugquzela abafundi bakamatikuletsheni balo nyaka, kodwa ngakolunye uhlangothi usidicilele phansi isithunzi salaba bafundi. Lesi senzo asikho emthethweni njengoba noMnyango wezeMfundo kazwelonke ungasawashicileli amagama abafundi emaphephandabeni.”
Omunye wabafundi abangaphumelanga uthe lesi senzo sibaphathe kabi kakhulu ngoba sikhombise ukungahlonishwa kwamalungelo abo.
“Sizamile ukuthi sikhulume nothishanhloko ukuze sithole incazelo kodwa besifike singamfici esikoleni. Into eqalayo ukwenzeka njengoba naye engenaso isikhathi eside elapha esikoleni.
“Sizizwa sithatheke kancane ukuthi yize singaphumelelanga, akumnikezi igunya lokuthi anekele izwe lonke imiphumela yethu.
“Lokhu kusehlise isithunzi ngisho nakwabanye abafundi, ngoba wonke umuntu esikoleni useyazi ukuthi sifeyilile nokuthi iziphi izifundo esingenzanga kahle kuzona, njengoba nazo bezibhaliwe eceleni,” kuphetha umfundi.
Okhulumela uMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal uMnu Sihle Mlotshwa usihlabe wasihlikiza lesi senzo wathi singukululaza isithunzi sabafundi.
“Sesike sathola izikhalazo eziningi ezifuze lezi ezikoleni ezihlukene, kodwa njengo Mnyango siyawujivaza lo mkhuba.
“Siyacela ukuba othishanhloko nothisha baseke labo abangaphumelelanga esikhundleni sokubahlaza,” kuphetha uMlotshwa.